Maitiro Ezvemagariro Evanhu Akarongeka | Martech Zone
Maitiro eSocial Media Matimu Akagadzirwa Sei
Svondo, Ndira 27, 2013 Douglas Karr
Iyi infographic kubva kuGO-Gulf.com inoita basa rakakura pakuratidzira iyo misiyano yakakura mukushanda kuri kuita vezvenhau zvikwata.
Dzidza kuyedza kwakawanda kuri kuitwa nemabhizinesi mune avo enhau enhau. Vangani vanhu vavakashandira pamasocial media campaign, hunhu hupi hunotarisirwa nevashandirwi mune vezvemagariro venhau neruzivo rwedu rwehuwandu hwemasangano eHurongwa hwemasangano avo enhau. Kubva kuGo-Gulf infographic, Maitiro Ehurongwa Hwevanhu Midhiya Matimu.
Chera zvakadzama mune ino infographic uye iwe uchaona akati wandei staring stats… senge chokwadi chekuti 13% yemakambani haasi kufara nematurusi aripo. Kana kuti iwo makumi mashanu muzana emakambani ari kushandisa vezvenhau kugadzira hutungamiriri, asi chete 45% ndivo vari kuyera shanduko! Tichine nzira dzekuenda mune ino indasitiri!
Tags: evanhu vezvenhaumagariro enhauchimiro chechikwata